Torolàlana CDC vaovao ho an'ny Amerikanina momba ny Omicron Covid Variant B.1.1.529
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Torolàlana CDC vaovao ho an'ny Amerikanina momba ny Omicron Covid Variant B.1.1.529
Vaovao momba ny fahasalamana • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Foiben'ny Fanaraha-maso ny areti-mifindra any Etazonia dia namoaka fanambarana momba ny karazana Omicron vaovao an'ny Coronavirus fantatra amin'ny anarana hoe B.1.1.529.
Fanambarana CDC momba ny fomba ahafantarana tsara ny karazana Covid Variant Omicron vaovao
Tamin'ny 26 Novambra 2021, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanasokajy karazany vaovao, B.1.1.529, ho Variant of Concern ary nomena anarana hoe Omicron. Tsy mbola nisy trangan'ity variana ity hita tany Etazonia hatramin'izao.
Ny CDC dia manaraka ny antsipirian'ity variana vaovao ity, izay notaterin'i Afrika Atsimo voalohany tamin'ny OMS. Feno fankasitrahana ny governemanta Afrikana Tatsimo sy ny mpahay siansa izay nifandray am-pahibemaso tamin'ny vondrom-piarahamonina siantifika manerantany izahay ary manohy mizara vaovao momba ity variana ity miaraka amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Amerikana sy ny Sampan-draharahan'ny olombelona ary ny CDC. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny indostria any Etazonia sy eran-tany izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'io variana io, rehefa manohy manara-maso ny lalany izahay.
Ny CDC dia manara-maso tsy an-kijanona ireo variana ary ny rafitra fanaraha-maso variana amerikana dia nahatsikaritra karazany vaovao amin'ity firenena ity. Manantena izahay fa ho fantatra haingana ny Omicron raha mipoitra any Etazonia
Fantatsika izay ilaina mba hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Ny CDC dia manoro hevitra ny olona hanaraka paikady fisorohana toy ny fanaovana saron-tava eny amin'ny toerana an-trano ho an'ny daholobe any amin'ny faritra lehibe na avo fifindran'ny vondron'olona, manasa tanana matetika, ary manalavitra ny hafa. Ny CDC dia manoro hevitra ihany koa fa ny olona rehetra 5 taona no ho miakatra dia miaro tena amin'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny fahazoana vita vaksiny tanteraka. Ny CDC dia mamporisika ny fatran'ny vaksiny COVID-19 ho an'ireo izay mendrika.
Tokony hanohy hanaraka ny mpandeha mankany Etazonia Torohevitra CDC momba ny dia.
Ny CDC dia hanome fanavaozana rehefa misy fampahalalana bebe kokoa.